Piriform All-in-One System Tools 2014 (DC 19.07.2014) - မောငျပေါကျ ( Maung Pauk )
Home Utilities ဆော့ဖ်ဝဲများ Piriform All-in-One System Tools 2014 (DC 19.07.2014)
Maung Pauk at 9:53:00 PM Utilities, ဆော့ဖ်ဝဲများ,
Piriform All-in-One System Tools ဆိုတာကတော့ Piriform ကထုတ်လုပ်တဲ့ CCleaner, Defraggler, Recuva, Speccy တွေကို တစ်ချက်တည်းနဲ့ Install လုပ်ပေးနိုင်တဲ့ Tool ဖြစ်ပါတယ်..
CCleaner ဆိုတာ ကွန်ပျူတာ System ရဲ့အမှားတွေ၊ ပျက်စီးနေပြီး မလိုတော့တဲ့ System ဖိုင်အမှိုက်တွေ၊ Browser တွေရဲ့ မလိုအပ်တော့တဲ့ Cookie တွေကို ရှင်းလင်းပေးတဲ့ Software ဖြစ်ပါတယ်..
Defraggler ဆိုတာက Hard Disk မှာ ဖိုင်တွေကို မှတ်လိုက်၊ဖျက်လိုက် လုပ်ရင် စနစ်တကျမဖြစ်တော့တဲ့ ဖိုင်တွေကို စနစ်တကျပြန်စီ နေရာချပေးတဲ့ Software ဖြစ်ပါတယ်..
Recuva ဆိုတာကတော့ ပျောက်ဆုံး၊ ဖျက်ပစ်တဲ့ဖိုင်တွေကို ပြန်ရှာပြီးယူနိုင်တဲ့ Software ဖြစ်ပါတယ်..
Speccy ဆိုတာက ကွန်ပျူတာရဲ့ အကြောင်းအရာတွေကို ဖေါ်ပြပေးတဲ့ Software ပါ.. ကိုယ့်ကွန်ပျူတာမှာ CPU အမျိုးအစား၊ Motherboard အမျိုးအစား၊ RAM ဘယ်လောက်တပ်ဆင်ထားတယ်၊ HDD ဘယ်လောက်ရှိတယ် စသည်ဖြင့် ဖေါ်ပြပေးပါမယ်..
ဒီတော့ ဒီလောက် အသုံးတည့်တဲ့ Utilities Tools တွေကို ဖိုင်ဆိုဒ် 22 Mb ကျော်ကျော်လေးနဲ့ ချုံ့ပြီး Tool လေးတစ်ခုအဖြစ် ဖန်တီးထားတာပါ..
Piriform All-in-One System Tools 2014 (DC 19.07.2014) မှာ- Piriform ထုတ် နောက်ဆုံးဗားရှင်းတွေဖြစ်တဲ့ -
CCleaner Pr/ Business 4.15.4725
Defraggler Pro 2.18.945
Speccy Pro 2\_1.26.698 တို့ ပါဝင်ပါတယ်.. အသေးစိတ်ကို အောက်မှ ဖတ်နိုင်ပါတယ်..
Use Defraggler to defrag your entire hard drive, or individual files unique in the industry. This compact and portable Windows application supports NTFS and FAT32 file systems.
Speccy is an advanced System Information tool for your PC. Need to find out what inside your computer? No problem! Speccy will give you all the information you need.
Whats New in CCleaner 4.15.4725 :
Whats New in Defraggler 2.18.945:
Whats New in Recuva 1.51.1063:
Whats New in Speccy 1.26.698:
Operation Systems: Windows 8.1, 8, 7, Vista or XP.
Download : 22.6 MB
Huawei U8825-1 G330 Offical Firmware Download
Huawei P7 Offical Firmware များ
Window7ကို Android Jelly Bean စတိုင်နှင့် သုံးရေ...
MSE antvirus ဖြုတ်﻿﻿ပေမဲ့ ထပ်﻿run﻿နေတယ်﻿ဆိုတဲ့လူမျ...
Sony Xperia Devices ကိုတွေကို Bootloader Unlock မလ...